သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရန်သင့်ကင်မရာကိုမှဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကိုဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
ဒီစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်း Non-သိသာအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်းမှားယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကအားလုံး၎င်း၏ရိုးရှင်းအတွက်က Windows OS ကို activation သည်, အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ညစ်စရာတာဝန်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ပစ္စည်း 0x80072f8f ကုဒ်နှင့်အတူဤဆုံးရှုံးမှုတွေထဲကမှမြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်။
စတင်မကြာမီအဆိုပါ activation လုပ်ငန်းစဉ်၏နိယာမခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system ကိုအထူး Microsoft ကဆာဗာတောင်းဆိုချက်ကိုပို့ပေးနှင့်သင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ ဒါဟာဒီအဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ရာ၏အကြောင်းတရားများဆာဗာမှကူးစက်ခံရဖို့အမမှန်ကန်ကြောင်းဒေတာအတွက်အိပ်ရကြ၏။ ဤအချိန်သို့မဟုတ်ကွန်ရက် parameters တွေကို setting (Down) လျြောထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အောင်မြင်သော activation တွင်လည်းဗိုင်းရပ်စ်များ, installed အစီအစဉ်များနှင့်ယာဉ်မောင်းအဖြစ် registry ကိုတွင် "အပို" သော့၏ရှေ့မှောက်တွင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အဆိုပါ PC မှာ install လုပ်ထားလျှင်, antivirus ဆော့ဖ်ဝဲကိုပိတ်ထားပါ။ ဤရွေ့ကားအစီအစဉ်များတောင်းဆိုမှုများကိုပေးပို့ခြင်းနှင့်ကွန်ယက်ကျော်တုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိတားဆီးနိုငျသညျ။
Read more: antivirus ကို disable လုပ်နည်း
ယင်းအမွေ software ကို device ကိုတစ်ဦးချွတ်ယွင်းဖြစ်ပေါ်စေသကဲ့သို့, ကွန်ယက်ကိုကဒ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုအပ်ဒိတ်လုပ်။
တစ်ဦးကားမောင်းသူ upgrade လုပ်ဖို့ဘယ်လို: ဆက်ဖတ်ရန်
လိုင်စင် key ကိုနံပါတ်များကို Verify ။ သငျသညျအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ data တွေကိုသုံးပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သော့ကိုပိတ်ပင်ထားစေခြင်းငှါစိတ်ကိုထား။
အကြောင်းပြချက် 1: အဆိုပါစနစ်အချိန်
စနစ်အချိန်များစွာကိုပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဆင်းခေါက်။ အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအဆိုပါ OS ကိုအပါအဝင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသက်ဝင်စေဖို့အပြင်အဆင်များ, ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကွာဟမှုပင်တစ်မိနစ်ဆာဗာသင်တစ်ဦးပြန်ကြားချက်ကိုပေးပို့ဖို့မအနေနဲ့ဆင်ခြေပေးလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင် settings ကိုချပြီး, တတ်နိုင်သမျှဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး, ဒါမှမဟုတ်အလိုအလျှောက်အင်တာနက်ကိုကျော်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်။ ထိပ်ဖျား: လိပ်စာကိုသုံးပါ time.windows.com.
အကြောင်းမရှိ 2: ကွန်ယက်ချိန်ညှိမှုများ
မှားယွင်းနေကွန်ရက်ဆက်တင်ဆာဗာ၏မြင်ကွင်းကို၏အချက်အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာ, မှားမေးခွန်းများကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နေပါစေ "ထတင်းကျပ်" သငျ့ settings ကိုဘယ်လိုကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့မူလတန်ဖိုးများသူတို့ကို reset ချင်လို့ပဲ။
အဆိုပါ "Prompt ကိုဆင့်ဆို"စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်အပြေး, အလှည့်၌, လေးသင်းရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအ command ကတော့ Winsock catalog ရဖို့အတွက်, ဒုတိယ TCP / IP protocol ကို, တတိယကို disconnect proxy ဖြင့်တူညီသောအရာမ, စတုတ္ထအတွက် DNS cache ကိုရှင်း။
စက် reboot နှင့်စနစ်ကိုသက်ဝင်ကြိုးစားပါ။
အကြောင်းပြချက် 3: An မမှန်ကန်ကြောင်း registry ကို setting ကို
Windose registry ကိုစနစ်အားလုံးကိုဖြစ်စဉ်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဒေတာများပါဝင်သည်။ သဘာဝကျကျ, သော့ "အပြစ်ရှိ" ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပြဿနာလည်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာ option ကို disable လုပ်ထားသော operating system ကိုပြသနိုင်ဖို့, ထိုဖြစ်ပါသည်, ပြန်ညှိမှုဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ရရှိနိုင်သောနည်းလမ်းများကိုမဆိုအားဖြင့် Registry Editor ကိုဖွင့်ပါ။
Read more: ဘယ်လိုက Windows အတွက် Registry Editor ကိုဖွင့်လှစ်ရန် 7
HKLM / Software များ / မိုက်ကရိုဆော့ဖ / Windows / CurrentVersion / Setup ကို / OOBE
ပေါ်မှာနှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါလယ်ပြင်၌ "Value ကို" ရေးသား "0" (သုည) ကိုကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ, ထို့နောက်ကျွန်တော်နှိပ် OK ကို.
အယ်ဒီတာကိုပိတ်ပြီးနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်အဖြစ် Windows7၏ activation နှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ အများဆုံးဂရုတစိုက်အထူးသဖြင့် registry ကိုတည်းဖြတ်ဘို့, အားလုံးလိုအပ်သောခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူသော့ကိုအသုံးပြုပါ။
ဗီဒီယို Watch: Aphasia: The disorder that makes you lose your words - Susan Wortman-Jutt (အောက်တိုဘာလ 2019).